GI SPORTZ waxaa abuuray ciyaaryahano hore oo sawir gacmeedyadu ku noolyihiin caleemaha dhirta dhirta, sariiro qulqulaya, oo ku duulaya palmettos. Iyadoo barnaamijyada la abuuray si kor loogu qaado waayo-aragnimada ciyaartoyda, waxa keliya oo macquul ah in la midoobo ciyaartoyda ciyaaraha aan jecel nahay barnaamij caalami ah oo loogu talagalay cayaaraha madaddaalada madadaalada kuwaas oo doonaya inay ka mid noqdaan bulshada rinjika.
Xubnaha GI SPORTZ
Bixinta deeqda ah $ 25 iyada oo loo marayo foomka diiwaangelinta ee internetka.
Waxaad heleysaa qaabka telefoonka Velcro Hat, T-Shirt, Tig ah, kaarka Aqoonsiga, iyo siriyaalka.
Faa'iidooyinka loogu talagalay Xubnaha ka imaanaya Goobta La Filayo
$ 10 ilaa $ 20 dhimis ka dhacdo dhacdo weyn oo weyn.
Dhacdooyinkaasi waxay ku qoran yihiin dhacdooyinka saxiixa.
Ma aha dhacdo kasta oo aan kor u qaadno waxay heli doontaa sicir-dhimis.
Waxaa jira Dhacdooyin Heer Sare ah oo xubnuhu ay kulmaan si ay u ciyaaraan.
Waxaa jira dhacdooyin Patch Brigade halkaasi oo ay dhici karto in ay dhacdo dhacdo gaar ah oo loogu talagalay xubnaha 100 ee ugu horreeya. Waxaa jira Dhacdooyin Wajiyadeed oo waaweyn oo leh qalab, iyo sidoo kale gelitaan dhimis, ama dhimis GI Booth ama mararka qaarkood labadaba. Faahfaahin ayaa lagu qori doonaa bogga Facebook ee dhacdo kasta.
Dhacdada Xabbad joojinta
Ka ururi sharooto ku salaysan ciyaaraha aad ciyaareyso.
Isu soo ururi Patch Global si aad u aaddo hal munaasabad ku yaala dalalka 3.
Isu ururi qalab Trifecta Patch si aad u aaddo dhacdooyinka 3.
Sidee loo furaa Patches guusha
Codso Patch Gaar
Dhacdooyinka soo socda ayaa ah dhacdooyinka Patch.
Dhacdo dhacdo oo bilaash ah oo loogu talagalay xubnaha 100-200 ee ugu horreeya ee hubiya dhacdada.
CPX Calaamadaha Hantida 3 - 2 / 9-11 / 2018
Ops Ops Extreme ee Kunoqoshada - 25-Mar / 2018
CPX Lafaha iyo Kalluunka - 3 / 23-25 / 2018
Ciyaaraha rasmiga ah ee Kubadda Cagta ee Texas - 3 / 24-25 / 2018
Vipers Wastelands ee Avid Extreme Sports Park - 5 / 4-6 / 2018
CPX Nolosha Cimilada 11 ee Jahawareerka Jahannamada - 5 / 18-20 / 2018
Adeero Weyn - 6 / 2-3 / 2018
Dunida Dunida 7 PB Explosion - 7 / 8 / 2018
Iskuday ION - 7 / 15-17 / 2018
Xeebaha Normandy River River PB - 7 / 20-22 / 2018
Lone Wolf Cagaarka buluuga ah - 7 / 15 / 2018
Taageerida Bariga - 8 / 17-19 / 2018
Ciyaarta CJ - 8 / 25 / 2018
KC Crusaders 24hr ciyaarta - 8 / 25-26 / 2018
Jahawareerka Dhibaatooyinka Dunida - 9 / 21-23 / 2018
Koobka Isboortiga Caalamka - 9 / 29-30 / 2018
Kombiyuutarrada aan Xamar lahayn 2 - 10 / 5-7 / 2018
Vipers Tombstone ee Avid Sports Park - 10 / 6-7 / 2018
Cayaarta kubadda gacanta ee Pandora - 10 / 13-14 / 2018
Lone Wolf Dagaalka Alien - 10 / 14 / 2018
Shumisyada iyo xagjirnimada 8 PB Explosion - 10 / 14 / 2018
Ciyaarta Viper TXR - 11 / 10-11 / 2018
Custins Dark Ops Extreme XXII - 11 / 18 / 2018
Taliyaha Tippmann Challenge - 6 / 12 / 2018
Xayawaannada OPL / Ciyaar ballaaran - 9 / 29 / 2018
Dagaalka For Hoth - 2 / 4 / 2018
Duufaanta Roobka ee Hunter Valley - 9 / 29 / 2018
Waxaan hadda ka shaqeyneynaa ku darista dhacdooyinka oo ay ku jiraan dhimista gelitaanka.
BPR waa barnaamij abaalmarin ah oo loogu talagalay xubnaha Brigade, abaalmarinta abaalmarinta ciyaaraha isboortiga (dhacdooyinka xulashada), iyo danjiraha sawir qaadaha (taliyaha).
Abaalmarin Ku Saabsan:
(2 Guuleystayaasha Guusha Grand Prize) Noqo GI SPORTZ PRO.
Diyaarad safar gaaban, hudheel, cunto, gal, hawo, kiis rinjiga adiga iyo saaxiib, mid ka mid ah cayaaraha ugu weyn ee ciyaaraha. Guuleystuhu wuxuu sidoo kale helayaa boorsada jeebka leh qalab cusub oo ay ka mid yihiin surwaal, jaar, oogada, taangiga, sumadeeyaha iyo gawaarida.
(5 Heerka Heerka Heerka sare)
Qalabka diyaarka ah ee ku jira shooladda birta, koofiyadaha, t-shirt, daboolka, surwaanka, joodariga, muraayadaha, taangiga, culeyska, iyo calaamad.
(5 Guulaysta Silver Silver)
Gaar goggle GI SPORTZ doorashadaada.
(10 Heerka Badeecadaha)
Soo qaado GI SPORTZ t-shirt iyo koofiyad.
Brigade Support Brigade
© 2018 GI Sportz. Dhamaan xuquuqda la keydiyay.